Samsung Galaxy S ကို Android 2.3.6 JVU သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း | Androidsis
Samsung Galaxy S သည် odin မှတစ်ဆင့် firmware 2.3.6 နှင့်၎င်း၏ CF Root ကို update လုပ်သည်
Francisco Ruiz | | Android Root ပါ, ရွမ်, Samsung
အောက်မှာတင်ပြထားတဲ့သင်ခန်းစာ Samsung Galaxy S ကို update လုပ် ဖြတ်. Odin Firmware ကို 2.3.6 နှင့်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ အမြစ်, အခြားအရာများအကြား, ကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ် ClockWorkmod ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ငါတို့အတွက် GT-I9000, နောက်မှမဆို install လုပ်နိုင်ဖို့ ပြုပြင်ထားသော rom နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုများအတွက် optimized ။
ပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးသင့်တာကငါတို့ရဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပါ Samsung galaxy S mode ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ် ဒေါင်းလုပ်ဤသို့ပြုလုပ်ရန်နှင့် terminal ကိုလုံးဝပိတ်ထားပြီးပါကအောက်ပါခလုတ်ပေါင်းများစွာဖြင့်ဖွင့်ပါလိမ့်မည်။ Vol အနုတ် + home ခလုတ် + ပါဝါခလုတ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင် နှိပ်၍ ဤကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်ပေါ်လာသည်အထိမလွှတ်ဘဲထုတ်ပစ်မည်
Download Download စနစ်ကိုရယူပါ
သို့ဆိုလျှင် firmware ကို install လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် JVU နှင့် အန်းဒရွိုက် 2.3.6 ငါတို့အတွက်အခြေခံနှင့်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာမည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်း အန်းဒရွိုက်, ဒီ tool ကိုထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ်ပါတယ် Odin အတွက် Windows ကို.
မသန်စွမ်း Download mode ကိုထွက်ပါ သငျသညျလုပ်ဖို့ရှိသည်အားလုံးချကိုင်ဖြစ်ပါတယ် ၁၀ စက္ကန့်လောက် Power ခလုတ်s, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းပျက်ကွက်, ဘက်ထရီကိုငါးစက္ကန့်ကြာအောင်ပြန်ထည့်သွင်းပါ။
2 Firmware ထည့်သွင်းမှုနည်းလမ်း
3 CF Root တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သတိရပါ သင်၏စက်တွင်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများအတွက်သင်အပြည့်အဝတာဝန်ယူရမည်, သင်ဒီမှာညွှန်ကြားချက်များကိုကပ်ပါကဘာမှမဖြစ်သင့်, သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ Galaxy စနစ်၏အတွင်းပိုင်းစနစ်ထဲသို့ ၀ င်သည့်အခါတိုင်းညွှန်ပြသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ပါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုထင်ရန်။
ဒါ့အပြင်ဒီသင်ခန်းစာမစတင်မီ သင်ဘက်ထရီအားသွင်းရပါမယ် သင့်ရဲ့ terminal ကိုမှ 100 ကြိမ် 100.
ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိရမည် ယာဉ်မောင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်မှန်ကန်စွာ install လုပ်ခဲ့တယ် PC, သငျသညျ Kies installed ကြလျှင် သင်၏ terminal ကိုအောင်မြင်စွာတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပြီးပါကလိုအပ်သောယာဉ်မောင်းများကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ Samsung ဒီနောက်ဆုံးပေါ်တရားဝင်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ၄ င်းကို install လုပ်ပြီးသင့်ရဲ့ကိရိယာကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။
mode ကို ၀ င်ရောက်ပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုပြီးတာနဲ့ပထမဆုံးလုပ်မှာပါ ဒေါင်းလုပ်ဤသင်ခန်းစာကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များအားလုံးကို download လုပ်လိမ့်မည် Windows အတွက် Odin သည် တရားဝင် JVU Firmware နှင့်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ CF Root ။
ထိုအခါငါကသင်၏ link ကိုထားခဲ့ပါ ရှိရမည် - ဖိုင် ၅၁၂၊ အရာများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် Odin သုံး၍ Flash ကျွန်တော်တို့၏ ဂလက်ဆီ, များသောအားဖြင့်၏တက်ဘလက်ထဲမှာလာပါတယ် firmware သို့မဟုတ် CF Root ပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံမှာဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဖိုင်ပျောက်နေတာကိုကျွန်တော်မနှစ်သက်တဲ့အတွက်အံ့သြမိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လုံခြုံမှုရှိစေရန်တစ် ဦး ချင်းစီကိုပူးတွဲပါတော့တယ်။
ဖိုင်အားလုံးကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့ ငါတို့ unzip ပါလိမ့်မယ် အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရပျ၌တည်၏ Pc ငါတို့အများဆုံးကိုသဘောကျတာကမင်းကိုဖန်တီးဖို့ငါအကြံပေးတယ် Desktop ပေါ်မှာ folder အသစ် ပြီးခဲ့သည့်ဖိုင် မှလွဲ၍ ကျန်ဖိုင်အားလုံးကိုချုံ့။ မရပါ။
ယခုဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Galaxy S ၏ menu သို့သွားပြီး activate လုပ်ပါလိမ့်မည် USB debugging, အောက်ပါလမ်းကြောင်း၌ရှိသော: Menu ကို / Settings / Applications ကို / ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ.
ဒါတွေအားလုံးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ငါတို့ကတစ်ဆင့်မွမ်းမံနိုင်ပါလိမ့်မယ် Odin ကျွန်တော်တို့၏ galaxy S ဗားရှင်း 2.3.6 နှင့်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ install လုပ်ပါ CF Root ပါ.
ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးငါတို့စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် Kies လုံးဝပိတ်ထားသည်, ဤအဘို့ငါတို့ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် Windows task manager ကျနော်တို့နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်မဆိုဖြစ်စဉ်ကိုအပြီးသတ်ပါလိမ့်မယ် Kiesစကားလုံးတစ်လုံးပါရှိပါကပွင့်လင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံး၏အမည်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် Kies တစ်နေရာရာမှာကျွန်တော်လည်းအဲဒါကိုပိတ်လိမ့်မယ်
အခုငါတို့ program ကို run ပါလိမ့်မယ် Odin ဒီလိုပြတင်းပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြလိမ့်မယ် -
ထို့နောက်ဖိုင်များကို Firmware ဖိုင်တွဲထဲတွင်အောက်ပါအတိုင်းထည့်ပါမည်။
နောက်ဆုံးပေါ် download လုပ်ထားသော Pit file ကိုနာမည်တူခလုတ်ထဲ၌ထည့်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းအတွက် PIT ကိုနှိပ်ပြီးယခင်သိမ်းဆည်းထားသောလမ်းကြောင်းသို့သွားပါ။
PDA ခလုတ်တွင် unzipped firmware ၏ကုဒ်ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့နေရာချမည်
PHONE ခလုတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် MODEM ဖိုင်ကိုနေရာချမည်
CSC ခလုတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် CSC ဟုခေါ်သောဖိုင်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်
ကျနော်တို့အမျိုးအစားသေတ္တာများစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် စာရင်းစစ်ဆေးပါ ရွေးချယ်စရာများကိုဘယ်ဘက်တွင်မှတ်သားထားသည် ပြန်လည် Partition ခွဲ, Auto Reboot လုပ်ပါ y F. အချိန်ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်.
အားလုံးစစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် Galaxy ကိုလုံးဝပိတ်ထားပါလိမ့်မယ်, နှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောခလုတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုဖွင့်ပါလိမ့်မည် Download mode၊ ၎င်းကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းမှမှန်ကန်စွာအသိအမှတ်ပြုထားသော Odin ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်စစ်ဆေးပါမည်၊ ၎င်းအတွက်စာလုံးကိုပြလိမ့်မည်။ COM ကိုယ့်အထက်လက်ဝဲဘက်နံပါတ်အားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
ယခုငါတို့ရုံ button ကိုနှိပ်ပါရန်ရှိသည် စတင် ဖြစ်စဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိဘာမှမထိပါနှင့်လက်ဝဲဘက်ခြမ်းတွင်စကားလုံးကိုတင်ပြသည် Pass တဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့မလုပ်သင့်သည်မှာသေချာသည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးရန် ရပ်ဆိုင်းမှုသို့မဟုတ် hibernación ဒီလိုမျိုး
လုပ်ငန်းစဉ်သည်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည် ငါးမိနစ်ခန့်။ ကျနော်တို့စကားလုံးမြင်သည်တိုင်အောင် PASS သူကကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်တခါဘာမှမထိနဲ့ Pass တ ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပြန်လည်စတင်ရန်စောင့်နိုင်သည်။
CF Root တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်တွင်သင်သည် Galaxy ကိုမှန်ကန်စွာအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဗားရှင်းသို့အပြည့်အဝလည်ပတ်ပါလိမ့်မည် Android 2.3.6နောက်တစ်ဆင့်တွင်၎င်းကို install လုပ်ရန်တူညီသော tool ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အပ်နှံပါမည် စိတ်ကြိုက် kernel ယင်းနှင့်အတူ အမြစ် နှင့် ClockWorkmod ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ထည့်သွင်းထားသည်
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Galaxy ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Recovery မှတဆင့်မည်သည့်သဟဇာတဖြစ်သော Rom ကိုမဆို install လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိနေပါလိမ့်မည်။
ငါတို့နောက်တစ်ခါ Odin ဖွင့်မယ်ငါတို့အရင်ကဖွင့်ထားခဲ့ရင် \_ t ကျနော်တို့ကပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိမ့်မယ်, ဤအချိန်ကျွန်တော်ဖိုင်တွဲထဲမှာဖိုင်ထားလိမ့်မည် CF Root ပါ, အပိုင်းအတွက် PDA Odin, နောက်ထပ်ဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့စစ်ဆေးမယ် ဤအပိုင်းကိုပြန်လည်ခွဲခြမ်းမှုမစစ်ဆေးပါ, အခြားရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကိုရွေးချယ်သင့်သည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည်ဤအချိန်တွင်မည်သို့မည်ပုံကြည့်သင့်ကြောင်းစခရင်ရိုက်ကူးမှုကိုပူးတွဲထည့်သွင်းထားမည်မှာသေချာသည်။
ပြီးတာနဲ့အရာအားလုံးပူးတွဲပါပုံ၌ရှိသကဲ့သို့ကြောင်းအတည်ပြု, ငါတို့က Galaxy ကိုပိတ်ထားပါလိမ့်မယ် ငါတို့ပြန်ဖွင့်လိမ့်မယ် Download modeတစ်ကြိမ်ဖွင့်ပြီးပါက၎င်းကို PC နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး option ကိုပေးပါလိမ့်မည် စတင် Odin ရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေ။
ဤအချိန်ဖြစ်စဉ်ကိုယူပါလိမ့်မယ် တစ်မိနစ်ထက်မက, အဖြစ်မကြာမီ Odin ကျွန်တော်တို့ကိုစကားလုံးပြန်ပေးအဖြစ် Pass တဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပြန်လည်စတင်ရန်စောင့်နိုင်သည်။
ဒီနှင့်အတူငါတို့ရပါလိမ့်မယ် လှည့်အဆိုပါ ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း နှင့်ဗားရှင်းမှ updated Android 2.3.6.
ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းအတွက်အကောင်းဆုံး Roms နှစ်ခုလုံးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်လို့စာပေအသစ်တွေအတွက်ညှိထားပါ Gingerbread က လတ်တလောလိုပဲ Ice Cream Sandwich နှင့် android 4.0 ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Samsung က Galaxy S ကိုမည်သည့်တန်ဖိုး pack နှင့်မဆို update လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး
ဒေါင်းလုပ် - Kies, Odin, firmware, CFRoot, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ 512 ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S သည် odin မှတစ်ဆင့် firmware 2.3.6 နှင့်၎င်း၏ CF Root ကို update လုပ်သည်
351 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဒီဟာ 9003 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား မင်္ဂလာပါ
Terminal တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင် firmwares များရှိသည်
ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကို odin ဖြင့် format လုပ်ပြီးအစိမ်းရောင်လိုင်းမဖြစ်ပေါ်ပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ c ah သည်မှတ်သားထားသကဲ့သို့ကျန်ရှိသည်။ ထိုကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
လူဟောင်း ၇၇ ဟုသူကပြောသည်
စကားမစပ်ကျွန်မကကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာပြwhenနာစတင်ခဲ့တယ် IMEI သည် 00499 သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလှည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာ (superuser) ကြောင့်ငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူး။ သင့်မှာအကြံဥာဏ်တွေရှိရင်၊
ငါဖုန်းပြောတယ်၊ ဒါဆို ၉၀၀၃ ပဲသေတယ်
ယခုသင်ခန်းစာကိုစတင်ရန် gt-i9000 ကိုစတင် flash လုပ်နေစဉ် Galaxy S, GT-i9003 အတွက်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာသင်၏မော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
Download mode သို့သင်ဝင်ရောက်နိုင်သေးမလားစစ်ဆေးပါ။ သို့မှသာ၎င်းကိုမှန်ကန်သော firmware ဖြင့်ပြန်လည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သေးသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
Ishmael Morano ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းသို့ဘဝကိုမပေးနိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အများစုနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ download mode မှာဖုန်းကပိတ်ထားပြီးထပ်မဖွင့်နိုင်တော့ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုအဖြေပေးမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ 🙁
CF root ရဲ့ link ပြတ်တောက်သွားပြီလား။
နို့! ဘာကြောင့် ICS post သို့ update ကိုသင်ဖျက်ပစ်ခဲ့သနည်း
joaquin မရှိ, 9003 အဘို့အဘယ်သူမျှမကောငျး
။ လိရှဲ ဟုသူကပြောသည်
ဘာလို့ဒီလောက်ကြာတာလဲဆိုတာကိုဘယ်သူ့ကိုမှသိလား၊ ဘယ်ဘက်ထိပ်ပိုင်းမှာ SBL ကိုဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်မိနစ် ၂၀ လောက်နှင့်ငါ့နဂါးငွေ့တန်း၏ဘားတန်းတွင်ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်မျှသာကျန်သေးသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ? ငါအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Sanchez ၉၉၂ ဟုသူကပြောသည်
သူကကျွန်တော့်ကိုလွန်သွားပြီလို့ပြောပေမယ့်စဖွင့်လိုက်တာကမျက်နှာပြင်မှာပေါ်လာမှာပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သော့ခလောက်ချိန်ညှိချက်များပေါ်တွင် မူတည်၍ ဖိအားများကြောင့်အဖြေမရသေးပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Sanchez 992 ကို Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအရာသည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မသိကြောင်း၊ 3G သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သလားသို့မဟုတ်လွဲမှားစွာပြုပြင်ထားသည့်အရာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မဆိုအကြံပြုချက်များတန်ဖိုးထား! SAlu2
3G ကကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာကကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီ (Euskaltel) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းကွန်ယက်များ - Access point အမည်များ - Access point အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ ထို မှနေ၍ ကျွန်ုပ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။ သူတို့ကငါ့ကိုပြောနေတာ။ အခု 3G ကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။
Miguelangel ၂၅ ဟုသူကပြောသည်
ငါအတော်လေးလေးနက်ပုံရသည်ပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ : S
သူက CF ROOT ကို install လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်သွားပြီ၊ အခုတော့ငါ့ကိုမစတင်တော့ဘူး။ ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမိုဘိုင်းဖုန်း၏အိုင်ကွန်တစ်ခုသည်၎င်းတို့ကြားရှိအန္တရာယ်နိမိတ် (အဝါရောင်တြိဂံနှင့် exclamation mark) ရှိသည်။ ငါကပိတ်ထားရန်ကြိုးစား mode ကိုသွားပါ ... ဒါပေမယ့်လမ်းမရှိသော။ ငါသည်လည်းဘက်ထရီကိုဖယ်ထားသော်လည်းပြန်ထားသောအခါပျော်ရွှင်သောသင်္ကေတပြန်ပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ကောင်းပြီ၊ ငါ ၀ င်ခဲ့တဲ့အုတ်ခဲထဲကနေရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါနာရီဝက်ခန့်ဘက်ထရီနှင့်ဆင်းမ်ကဒ်ကိုဖယ်ရှားပါပြီ။ ငါဘက်ထရီကို (SIM ကတ်မဟုတ်) ပြန်ထည့်ပြီး Download mode ထဲသို့ ၀ င်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ပြီးရင် firmware 2.3.6 ကို Odin နဲ့ထပ်မံ install လုပ်ပြီးဖုန်းပြန်ရှင်လာပြီ။ ငါအမှားလုပ်မိနိုင်တဲ့နေရာကိုငါမသိပေမဲ့ငါကြောက်လန့်ပြီးတဲ့နောက် CF ROOT ကို install မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။
တြိဂံပုံနှင့်ကွန်ပျူတာနှင့် sbl လုပ်ငန်းစဉ်ပြသနာများရှိသူများသည် Odin ရှိတပ်ဆင်ခြင်းသည်တိုးတက်ခြင်းမရှိတော့သောသူများအတွက်၊ ဤတွင်သင့်အားကောင်းသောသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးပါမည်။ http://www.carvax.com.mx/2012/01/26/reparar-galaxy-s-i9000t-de-semibrick/
Download mode သို့ ဝင်၍ မရပါက။
မင်္ဂလာပါ၊ Odin ပြီးဆုံးသောအခါ screen mode မှောင်မိုက်သွားသည်အထိကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်လိုက်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ပါသည်။ ယခုသူသည်အသက်သွေးကြောကိုမဖွင့်၊ ဒါကိုပြင်လို့ရလား
odin က PASS ကိုပေးခဲ့သလား။
ငါနဲ့အတူတူပါပဲ။ မင်းလုပ်ခဲ့တာငါသိတယ် ???
၎င်းသည်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်သင်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားသည့်အခါ၎င်းကိုသော့များပေါင်းစပ်။ ဖွင့်ပြီးဒေါင်းလုပ်သည်ထပ်မံပေါ်လာမည်။ သင်ကျန်ရှိသောကိုဆက်လက်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ မေ့မြော hehehej yeelzu_22hot အတွက်သာ
ငါအဲဒါကိုမွမ်းမံခဲ့ပေမယ့်အခုဆိုရင် network ကငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုဘူး၊ ငါဖုန်းခေါ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအင်တာနက်ကိုသုံးလို့မရဘူး။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများကိုရိုက်ထည့်ပြီး APN ဒေတာကိုပြင်ဆင်ပြီးသင်၏အော်ပရေတာကိုခေါ်။ သူတို့ပေးလိမ့်မည်။
သူငယ်ချင်း firmware စကားဝှက်ကဘာလဲ ??? rar file ကို unzip လုပ်ရန် del pda, ဖုန်းနှင့် csc
Albixi ၁၀၁ ဟုသူကပြောသည်
အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့သင်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ အကယ်၍သာ ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ အဲဒါဟာဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
မိုဘိုင်းကွန်ယက်ဆက်တင်များမှ APN များကိုပြုပြင်ပါ
ပြproblemနာကသင်၏ကွန်ပျူတာ၏ပုံစံသည်ဤစာမူနှင့်မတူ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ ဤစာမူ၏ခေါင်းစဉ်မရှင်းလင်းပါ၊ ထိုအမှားများကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် galaxy S gt- i9003၊ ဒီ post ကို gt-i9000 model အတွက်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းတွေကိုခိုးယူပြီးမင်းရဲ့ဖုန်းကို USB ကြိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အထူးဆားကစ်ပြားကိုသုံးရမယ်လို့ပြောရတာဝမ်းနည်းပါတယ်။ ငါမကြာသေးမီကဆဲလ်ဖုန်းဝယ်ယူလိုက်သောကြောင့်၎င်းတွင်အာမခံရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့ခေါ်သွားပြီး၎င်းသည်ယုတ္တိတန်သောတိုတောင်းသော circuit ပြတ်ရွေ့ဖြစ်ကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိသောအခါ၎င်းတို့သည်အသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် mobile up-to-date ရှိနေပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော် CF Root ကို download လုပ်သောအခါ၎င်းသည်အခြား program တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်နေသည်ဟုထင်ရသည်။ CF Root ဘယ်မှာမှမရှိဘူး။
ငါစူပါအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောမှစူပါအသုံးပြုသူမှ flash ကိုအတွက်သွားပြီ! သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် bonilla18luis နှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာရှိသည်။ roaming ကိုသက် ၀ င်စေသော်လည်း၎င်းသည်ကွန်ယက်နှင့်မချိတ်ဆက်နိုင်ပါ။ မိုဘိုင်းကွန်ယက်များတွင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက် (Boda fone) နှင့်ချိတ်ဆက်မှုလည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ APN ဖွဲ့စည်းမှုကိုလည်းကြည့်ရှုသည် (http://www.vodafoneteayuda.es/2011/12/habilita-la-conexion-a-internet-en-tu-terminal-con-android/) ငါလည်းအဲဒါကိုမလုပ်နိူင်ဘူး။ အကူအညီအနည်းငယ်ကိုသုံးနိုင်တယ်
Raval ထံမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
BLOG တွင်သင့်တွင် apn ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း
06/11/2012 04:35 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Paola Dominguez ဟုသူကပြောသည်
ငါအဲဒီ option မရှိဘူး !!! ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
Paola Dominguez အားပြန်ပြောပါ
ချိန်ညှိချက်များ / ကြိုးမဲ့နှင့်ကွန်ယက်များ / မိုဘိုင်းကွန်ယက်များ / Apn ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသင့်ကုမ္ပဏီမှသင်ပေးမည့်အချက်အလက်နှင့်အတူ APN အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။
အကူအညီအားလုံးကိုငါကူညီနိုင်ပြီ၊ ငါဖွင့်လိုက်ပြီ၊ ငါမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကီးဘုတ်ဆက်တင်ကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်
CF ROOT SALE zIMAGE ဖိုင်တွဲအတွင်း၌၊ မည်သည့်အရာကိုမဆို ODIN တွင်လုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ သင်ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သလား။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သင် .tar ဖိုင်ကို unzip လုပ်ပြီးအဲဒါကို unzip လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်၊ cfrootxxxxx.tar ကို odin မှာသုံးရမယ်။
Cfroot သည်ဖိုင်တွဲတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် .tar ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင် odin တွင်တိုက်ရိုက်သုံးရန်လိုသည်။
ဗစ်တာ Andres Delgado Ramirez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါအလွန်ကောင်းသောညနေခင်းသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်ဒီဗားရှင်းကိုသုံးကြိမ်တပ်ဆင်ပြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခု၊ ထူးဆန်းတဲ့အရာတခုခုကအမြဲတမ်းငါ့ဆီလာတယ်။ ငါမှတ်ချက်တွေအားလုံးနီးပါးကိုဖတ်ပြီးပြီ၊ အဲဒါဟာငါနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ ၎င်းကိုဖွင့်ပြီးနောက်၎င်းကိုတပ်ဆင်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရောက်လာသောအခါမာလ်တီမီဒီယာအသံမပါဘဲဆက်ရှိနေပါမည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသိပေးချက်များနှင့်အခြားချက်တင်အရာများသည်အသံမကြားရသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာမာလ်တီမီဒီယာအသံအတိုးအကျယ်နှင့်စနစ်အသံအတိုးအကျယ်ဖြစ်သည်။ အသိပေးချက်နှင့်အဝင်ခေါ်ဆိုမှုတို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသင်ဘာဖြစ်မည်ကိုသင်သိလျှင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုငါမသိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများကိုတပ်ဆင်ပြီးကတည်းကအလွန်ကောင်းမွန်သောဗားရှင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အားကူညီပါ။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီချင်တယ်ဆိုရင်ငါ့အ fb သို့ငါ့ကိုထည့်ပါ victor860609@hotmail.com ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဗစ်တာ Andres Delgado Ramirez အားပြန်ပြောပါ
ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ၊ ငါ့ကိုစကားဝှက်တောင်းတယ်၊ အတည်ပြုတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်။ အဲဒါဘာလဲ။
ငါက Sim ဖြစ်လိမ့်မယ်ခန့်မှန်း
အလွန်ကောင်းစွာအရာအားလုံးစုံလင်သောသွားလေ၏ !!!!! ယခုကျွန်ုပ်၏ SGS တွင်မျက်နှာပိုင်းဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှု၊ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ၊ sg2s များသည်သော့ခတ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများရိုက်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုများကူးယူခြင်းများပြုလုပ်သည်။ ယခုသင်တင်ပို့လိုက်သော update ပို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သွားနေသည် !!!! ဂုဏ်ယူပါတယ် !!!!
ဟယ်လို!! ကျွန်ုပ်တွင်ဤပြသနာအားလုံးနှင့်ပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခလုတ်သုံးခု၏ combo ကို လုပ်၍ download menu မပါသော menu ကိုရရှိသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အား download mode ၌ထည့်သွင်းခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် android shovel ဖြင့်လည်းမရပါ။ ဒါကြောင့်ငါက odin ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်။ ငါ့ကိုသိတယ်။ အရာအားလုံးကိုသူ့နေရာမှာထားလိုက်တယ်။ အစကနေစတင်အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်အလုပ်ကစတင်လိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် setupconnection မှာပဲကျန်တော့မယ်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ၊ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အီးမေးလ်ထားခဲ့ပါ iavp79@hotmail.com။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ
အတိအကျကျွန်တော့်မှာဖြစ်ပျက်နေသည်၊ ၎င်းသည် SetupConnection တွင်ဖမ်းမိပြီးအလုပ်မလုပ်ပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေပါ။ စကားဝှက်သည်သင်ဖန်သားပြင်ကိုသော့ဖွင့်ရန်အသုံးပြုသောစကားလုံးဖြစ်သည် (မိုဘိုင်းကွန်ယက်၏ pin မဟုတ်ပါ)
ဤပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည် terminal ကိုလှည့်ပြီး၎င်းသည် setupconection တွင်ရှိနေမည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမခြေလှမ်းကိုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏မျက်နှာပြင်သည်မှေးမှိန်လာပြီးပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ယခုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သနည်း။
ငါ့ကိုအတူတူဖြစ်ပျက် ... ။
ဂျိုင်းဖွန်ဆို ရာမီရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
jair alfonso ramirez အားပြန်ပြောပါ
ပြproblemနာကသင်၏ပစ္စည်းကိရိယာ၏ပုံစံသည်ဤပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပုံစံနှင့်မတူ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ဤစာမူ၏ခေါင်းစဉ်မှာမရှင်းလင်းပါ၊ သင်အမှားများလုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိရိယာသည် galaxy S gt- i9003၊ ဒီ post ကို gt-i9000 model အတွက်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းတွေကိုခိုးယူပြီးမင်းရဲ့ဖုန်းကို USB ကြိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အထူးဆားကစ်ပြားကိုသုံးရမယ်လို့ပြောရတာဝမ်းနည်းပါတယ်။ ငါမကြာသေးမီကဆဲလ်ဖုန်းဝယ်ယူလိုက်သောကြောင့်၎င်းတွင်အာမခံရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့ခေါ်သွားပြီး၎င်းသည်ယုတ္တိတန်သောတိုတောင်းသော circuit ပြတ်ရွေ့ဖြစ်ကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိသောအခါ၎င်းတို့သည်အသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
LluísAguilà Fosch ဟုသူကပြောသည်
LluísAguilà Fosch သို့ပြန်သွားပါ
သင်္ကေတ ၂၀၀၉ ဟုသူကပြောသည်
Samsung Galaxy S Captive i897 တွင်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။ ငါ GT-I9000 ကိုဖတ်ပြီးပြီ၊ ငါဟာအသစ်အဆန်းဖြစ်တာကြောင့် Andriod ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိဘူး။ ငါ့မှာ firmware 2.3.5 ရှိမယ်ဆိုရင်တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဒီနည်းနဲ့ 2.3.6 သို့ upload လုပ်လို့ရမလား။
Gustav ၁၉၉၈_ ဟုသူကပြောသည်
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့သူတွေလိုပဲ၊ PASS က android ရဲ့ update ကိုထွက်လာပြီးနောက်ငါ့ထံသို့ကပ်လျက်တည်ရှိပြီး၊ ဘာမှမသင်္ကေတမပေးရဘူး၊ ငါဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်ပြီး၊ ပြန်လည်ရယူရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့တယ် အချက်ပြမပေးပါဘူး ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
ငါ့မှာ Samsung Galaxy S ရှိတယ်ဒါပေမယ့် Digital TV Tuner ပါတဲ့ဗားရှင်း။ ကျွန်ုပ်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကျင့်သုံးပါကကျွန်ုပ်သည်တီဗွီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်လော။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ကျွန်ုပ်မယုံဘူးသူငယ်ချင်း၊ တရားဝင်မွမ်းမံခြင်းမဟုတ်သောအရာအားလုံး၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းလျှောက်လွှာကိုသယ်ဆောင်သည်ဟုမထင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ပင်မသိသေးပါ။
Semi brick ရှိသူများအတွက် firmware installation အဆင့်အားလုံးကိုသင်ပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်အဆုံးတွင်ဆဲလ်ဖုန်းဆက်တင်များထည့်ပြီး usb debugging ကိုထပ်ထားပါ။ သို့မဟုတ်ပါက odin ရှိ cf root သည်သူတို့ကိုလက်မခံပါ။
ဆဲလ်ဖုန်းကိုငါဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာပြင်ကမှောင်လာပြီးမတုံ့ပြန်ဘူး။ ငါဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်၊ အဲဒါကတုန့်ပြန်မှုမရှိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် download mode မှာမဟုတ်ဘူး
၎င်းသည်ဘက်ထရီမရှိဘဲခဏအနားယူပြီးပြန်လည်လည်ပတ်မှုသို့ပြန်သွားပါ၊ ပြန်လည်ပါ ၀ င်မှုကိုမှတ်သားရန်ပထမ ဦး ဆုံး Flash ကိုအထူးဂရုပြုပြီးအရာအားလုံးကိုပြန်လည်တောက်ပပါ။ ဒုတိယတွင် - Kernel သို့မဟုတ် cfroot တွင် - ပြန်လည်အမှတ်အသားမပြုပါ၊
Stephi veronik ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် galaxy player (ypg70) ရှိပြီးယခုတစ်ပတ်မှ multimedia မကစားပါ။ သူကဂီတကိုမဖွင့်ပါဘူး (ပြတ်တောက်သွားပြီး၊ လျှောက်လွှာထဲမှာအမှားတခုပေါ်လာတယ်)၊ သတိပေးချက်တွေမမြည်တော့ဘူး၊ အသံ၊ ဗွီဒီယိုကိုမကူးနိုင်ဘူး၊ YouTube (အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်လည်းရှိတယ်) ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုကိုမဖွင့်ဘူး။ ငါနဲ့သူနဲ့ ၃ ပတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုသင့်တယ်။ သူတို့က (ငါက ၀ န်ဆောင်မှု / အာမခံစင်တာသို့ပို့ရန်ငွေတောင်းခံလွှာမရှိပါက) ………။ စက်ရုံ၏တန်ဖိုးများနှင့်ပြfixedနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?????
Stephi Veronik ကိုပြန်ပြောပါ
Download mode ထဲဝင်ပါသလား
terminal ကိုပိတ်ပြီး Volume ခလုတ်များနှင့် home plus power တို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း နှိပ်၍ ဖွင့်ပါ။ Android ကိုတည်ဆောက်နေစဉ်အဝါရောင်သင်္ကေတတစ်ခုပေါ်လာသည်ကိုပြောပါ။
MSF သည် ဟုသူကပြောသည်
ငါညွှန်ကြားချက်များကိုစာ၏အောက်ဆုံးသို့ လိုက်၍ ထိတွေ့မှုမရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
အန်တိုနီယို Duran ဟုသူကပြောသည်
ထိတွေ့မျက်နှာပြင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အတည်ပြုသောလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုရရှိပြီးမည်သည့်အရာမှမလုပ်ဆောင်နိူင်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
Antonio Duran အားပြန်ပြောပါ
အဆင့်တိုင်းကိုဂရုစိုက်ပြီးအစမှပြန်လည် Flash လုပ်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနောက်တဖန် flash လိမ့်မယ်။
Sergio Castillo Yrizales ဟုသူကပြောသည်
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ သင်ဘယ်လောက်ပဲပေးကမ်းပေးဆက်ပါ၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကမတုံ့ပြန်ဘူး။ အဖြေတစ်ခုရှိမလားသိလား။
Sergio Castillo Yrizales သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းတွင်ကျွန်ုပ် s2 ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးစတိုးဆိုင်တစ်ခုအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စတိုးဆိုင်သို့အမြဲသွားရမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ငွေမတောင်းသော်လည်းမြည်း၌နာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်ပါသည်။ android အလုပ်လုပ်တဲ့သင်္ကေတပါ။ သတိပေးချက်တစ်ခုသာပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။
Play Store တွင်တွေ့ရမည့် Galaxy Unlock နှင့်သင်ကိုယ်တိုင် Samsug Galaxy S ကိုသော့ဖွင့်နိုင်သည်။
OSM> MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5 သည်တရားဝင်သည်။
MD5 စစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့သည် ..
Odin v.3 အင်ဂျင် (ID: 4) ..
ကန ဦး ..
ပစ်မှတ်ကို OFF မဖွင့်ပါ !!
သူတို့ဟာမိနစ် ၂၀ လောက်သွားပြီးလုံးဝမလှုပ်ပါဘူး။ အပေါ်က box ထဲမှာ SET PARTITION လို့ဆက်ပြောတယ်။ ဘာမှမတက်ဘူး။ ငါဆက်စောင့်နေသင့်လားဒါမှမဟုတ်ဘာလုပ်ရမလဲ။
PS: Galaxy S 9000 ပါ
ချိန်ညှိချက်များမီနူး / ဆက်သွယ်မှု / မိုဘိုင်းကွန်ယက်များ / apn၊ ဤလမ်းကြောင်းတွင်ရွေးချယ်စရာမရှိလျှင် APN အသစ်တစ်ခုထည့်ရန်နှိပ်ပါ။ ပထမရွေးစရာတွင် Yoigo internet ကိုထည့်ပါ၊ ဒုတိယတွင်အင်တာနက်ကိုထည့်ပါ၊ နောက်ကျောခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး APN ကိုရွေးပါ ငါတို့ဖန်တီးလိုက်ပြီ၊ Galaxy ကို restart လုပ်ပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်း ၄ ကိုကြိုးစားခဲ့ခြင်းကသင့်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော် viber ဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများတွင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အသံကိုနားမထောင်ခဲ့ပါကပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပါကကျွန်ုပ်သည်အခြားပရိုဂရမ်များကိုလည်းကြိုးစားခဲ့သည်။ ဗားရှင်း ၄ ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သသကဲ့သို့ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့ပါ။
tuto, odin ကကျွန်တော့်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်၊ ဆဲလ်ကအနက်ရောင်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်၊ ​​ဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်တယ်၊ ဖွင့်မထားဘူး၊ download လုပ်တဲ့နေရာမှာငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ်။2ပတ်အကြာငါဝယ်လိုက်တယ်။
မာလာဂါ ၉၁ ဟုသူကပြောသည်
မင်းကလူကြီးကြီး၊ မင်းပြောသလိုငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြproblemsနာမရှိဘူး။
မင်းရဲ့စာကိုမင်းရဲ့ခြေရာအတိုင်းငါလိုက်ပြီး touch screen ကမတုံ့ပြန်ဘူး။
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကစကားဝှက်ကိုအတည်ပြုသည်
kurai zafi ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာငါအတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်ပျက် !!!!!! သင်ပြင်လို့ရမလား ရက်
kurai zafi အားပြန်ပြောပါ
John Eduardo Carranza Pacheco ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့ကြသလဲ။ '(ကျွန်ုပ်သည် samsum galaxy S i9000 ဖြစ်သည်
Jhon Eduardo Carranza Pacheco ကိုပြန်ပြောပါ
မေးခွန်းကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုမည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ငါက enable လုပ်ပြီးပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ APN ကို configure လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ device တစ်ခုတည်းက data network ကိုအလိုလျောက်ချိတ်ဆက်ထားလို့ပါ။ APN ကိုထည့်လိုက်ရင်စိတ်ကူးမရှိတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ စကားမစပ်ကျွန်တော့်ရဲ့ဆဲလ်ကအခမဲ့ဖြစ်တယ်။
ငါလုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုထိတွေ့မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ (touch screen) ၎င်းကိုငါဖွင့်သောအခါငါလုပ်သမျှကိုမပြုလုပ်နိူင်ပါ။
သင်၏ terminal ၏စံပြကဘာလဲ '
Lyzeth Linares Sandoval ဟုသူကပြောသည်
Felipe ငါမင်းရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲငါပြသခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော့်မျက်နှာပြင်သေသွားပြီ။ ဒါပေမယ့်ဒီထိတွေ့မှုမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တာကအဖြေပဲ။
Lyzeth Linares Sandoval အားပြန်ပြောပါ
i9000T အတွက်အလုပ်လုပ်တယ် ??
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းသည်အိမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူက recovery mode ကိုတောင်မသွားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် download လုပ်ထားတယ်။
Juan Carlos Rosales ဂွေဗားရား ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ဤ Rom သည် galaxy s GT-I9000t အတွက်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်
Juan Carlos Rosales Guevara ကိုပြန်သွားပါ
ဒီ rom ဟာ i9000 အတွက်မဟုတ်ဘူး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း၊ မင်းဆဲလ်အတွက် rom မဆိုအကြံပေးနိုင်မလား။ ငါမွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကငါအခန်းငယ်ရှိသည်။ froyo 2.1.1 ။
ဘလော့ဂ်ပေါ်ရှိ Team RemICS-UX ကိုရှာပါ
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ gt-i9000t အတွက် ICS rom ကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲသိလား။ ဒီကိရိယာကဒီကိရိယာအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Juan Carlos Rosales placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းကောင်း၊ ငါပြောတာက GT-i9000 အတွက်ပြောတာတောင်မှငါစွန့်စားပြီး rom ကို install လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတပ်ဆင်လိုက်ပြီး rom ကငါ့ရဲ့ Gt-i900t မှာအလုပ်လုပ်တယ်၊ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ်။
Juan Carlos Rosales ကိုပြန်သွားပါ
Samsung Mobile မှပေးပို့သည်
FranciscoRosizales ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပဲ FranciscoRuizAntequera ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက်ပေးရန် Link ကို
ငါဘာအမှားလုပ်မိလဲဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ ODIN မှာစဖွင့်တဲ့အခါ "boot.bin" ထဲမှာချိတ်ထားလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ terminal ရှိအပြာရောင်တိုးတက်မှုသည် ၂% ဖြစ်သင့်သည်ထက်မပိုပါ။ ငါထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစားခဲ့ပြီ အဲဒါကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ ??
ကိုယ့် galaxy S gt-i9003 ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားပြီးသေသွားပြီ
ငါမည်သည့် rom မဆို galaxy S ဖြစ်သော်လည်းအလုပ်မလုပ်ကြောင်းတွေ့ကြုံ
၎င်းသည် GT-i9000 အတွက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါ၊ သင် download mode ကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်မလားစစ်ဆေးနိုင်ပြီလားဆိုတာစစ်ဆေးပါ။
Friend သည်အဆင့်များအားလုံးကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် application အမြောက်အများကိုသုံးပြီးပင်မမျက်နှာသို့သွားသောအခါ၎င်းသည်ကွင်းဆက်တစ်ခုအတွင်း၌ရှိနေပြီးမျက်နှာပြင်သည်အမည်းရောင်ဖြစ်နေပြီးနောက်ခံပုံများထပ်မံထွက်ပေါ်လာကာအကန့်အသတ်မရှိဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်အရာကားအဘယ်နည်း။
Silvina Garrido ဟုသူကပြောသည်
ငါခြေလှမ်းများအားလုံးလိုက်ပြီး ODIN ၌ငါ Start ကိုပေးလိုက်သောအခါလမ်းကြောင်းနှင့် CODE ဖိုင်နှင့် OK ခလုတ်တို့ကိုပြသော windows message (ကြက်ခြေနီ) ကိုပြသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်လက်ခံလျှင် ... ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်နေပြီး ODIN message box တွင်ပြလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ခဏစောင့်ပါ .... ငါမိနစ် ၂၀ ကျော်စောင့်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ဘာမှလုပ်မနေဘူးဆိုတာငါဘာလုပ်သင့်လဲ ??? အကယ်၍ ကျွန်ုပ် ACCEPT ကိုမနှိပ်လျှင်၎င်းသည်ဘာမှမလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုမျှမထိပါဟူသောအကြံပြုချက်များရှိသော်လည်း ... မိနစ် ၂၀ အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည် ODIN ကိုပိတ်။ မိုဘိုင်းကိုပိတ်လိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မစတင်မှီကကဲ့သို့အရာအားလုံးကျန်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကိုဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့် firmware ကို update လုပ်ကြောင်းကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းသည် Galaxy S I20 ဖြစ်သည်
silvina garrido အားပြန်ပြောပါ
Navarrogarch Jason71 ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Samsung (VoiceOver) ကဲ့သို့သောအသံဖိုင်ရှိသူရှိမရှိသိလိုပါသည်။ ဤလျှောက်လွှာသည်အမြင်အာရုံနိမ့်ကျသူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်သည် Samsung Galaxy SXNUMX ကိုပိုနှစ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မင်းအဖြေအတွက်ကြိုတင် ...
Navarrogarca Jason71 ကိုပြန်သွားပါ
gt-I9000t အတွက် fit
၂.၃.၆.၆ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး application များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးပါက cf root ကိုထည့်ပြီးပါက၊ ကျွန်ုပ်လက်ကိုင်ဖုန်းရှိကျွန်ုပ်၏ဒေတာများဆုံးရှုံးသွားပါသလား။
ငါဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်သီအိုရီအရသင့်မှာဒေတာ (သို့) လျှောက်လွှာတစ်စုံတစ်ရာမဆုံးရှုံးသင့်ဘူး
ငါလုပ်ပြီးပြီ ကျွန်ုပ်၌ 3g နှင့်ပြproblemsနာရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ (Movistar, ချီလီ) ကိုခေါ်။ ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုဖုန်းသည်မည်သည့် Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုမှရှာမတွေ့ပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသည်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်း ၁ ခုနဲ့ပြproblemနာ ၁ ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်ကဘက်ထရီက ၁၀၀% ဖြစ်ရမယ်။ အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းက ၁၀၀% အားမသွင်းထားဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့ကို ၉၀% အထိထွက်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်ဘက်ထရီသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်မှသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
အခြားပြproblemနာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ချိတ်ဆက်မှုရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်စမ်းကြည့်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ၎င်းသည်စက်ကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်းနှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်သည် ports များနှင့်ဘာမျှမပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် kies driver များတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီနည်းနဲ့ငါ debugging ကို activate လုပ်တယ်။ task manager က kies နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီး Download mode မှာလုပ်တယ်။
ကျနော်တို့ Samsung Galaxy S model GT-I9000 အကြောင်းပြောနေတာလား။
သေချာတာပေါ့သူငယ်ချင်း၊ သူက GT-I900T ပါ။ GINGERBREAD.UMJV2.3.3 နဲ့ firmware2ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒါကိုငါမွမ်းမံချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်၊
GT-I9000T သည် GT-I9000 မဟုတ်ပါ၊ ဤသင်ခန်းစာကို GT-I9000 တွင်စမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ terminal အတွက်မည်သည့်အရာကိုပြောရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အကောင်းဆုံးမှာသင် sammobile ဖြင့်သင်ရပ်နားပြီးသင်အရာအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ terminal ၏ model ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့အချိန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။
odin တွင်၊ download mode ထဲ၌၎င်းကိုချိတ်ဆက်သောအခါနံပါတ်ပါသော COM စကားလုံးပေါ်လာမည်မဟုတ်လော
ဟင့်အင်း၊ ကျွန်ုပ်ပြောလိုက်သည်မှာ၎င်းသည်စက်ကိုမှတ်မိခြင်းမရှိဘဲ COM ကိုမည်သည့်အခါကမျှရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
PS.- ငါဘာလုပ်သည်ကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သူထင်မြင်ချက်တွင်၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ရန်စီမံခဲ့ပါကကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်ဘက်ထရီသည်ပြaနာမဟုတ်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
samsung galaxi ace vale callampa
ကောင်းပြီ၊ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာက Samsung Galaxy S အတွက်မဟုတ်ဘဲ Samsung Galaxy S အတွက်ဖြစ်တယ်။
မင်းရဲ့ဖုန်းက Galaxy S model GT-I9000 ဖြစ်မလား။
ayuuuuuuuuuudaaaaaaaaaaaa !! ဤဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပါက၊ ၎င်းကိုတုန်ခါနေသောနဂါးငွေ့တန်းများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုက်ပြီး၊ ၎င်းသည်တူညီခြင်း မရှိ၍ dowload mode ထဲ၌ကျွန်ုပ်မထည့်သွင်းနိုင်ပါ။ ၎င်းကိုနဂိုမူလနဂိုပုံသဏ္toာန်သို့ပြန်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ .. မင်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်🙂
Axelflorido ၃၈ ဟုသူကပြောသည်
ဆဲလ်ဖုန်းသည်ပထမဆုံးဖြတ်သန်းပြီးနောက်တွင်မဖွင့်ပါ ... သေသွားသည်။ လူကိုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။
ငါ i9003 မှာဒီ firmware အတွက်ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် Samsung Galaxy gayxy scl ပေါ်မှာငါ့ကိုမဖွင့်ဘူးဒါမှမဟုတ် download mode ထဲမသွားဘူးဆိုတာကိုငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါဘာလုပ်လို့လဲ? ကျေးဇူးပြုပြီးအရေးကြီးပါတယ်
ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဒီ post ခေါင်းစဉ်ကမရှင်းဘူး၊ မင်းအမှားတွေလုပ်မိနိုင်တယ်၊ ငါမကြာသေးမီကဆဲလ်ဖုန်းကိုဝယ်လိုက်တယ်၊ အာမခံချက်ရှိနေသေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကိုယူသွားပြီး၊ ၎င်းသည်ယုတ္တိပျက်ကွက်မှုတိုသော circuit တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသစ်တစ်ခုအတွက်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ, မင်း fuck ဆိုတဲ့, သင်ဖတ်ရှုဖို့ရှိသည်, သင်သိသလား
ငါကဲ့သို့သော fortunate မဟုတ်သောသူများအတွက် csc, modem စသည်ဖြင့်မည်သည့်ဖိုင်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ၎င်းဖိုင်တွင်၎င်းတို့ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတွင် PDA ၌ရှိသည့်အတိုင်း .tar ဖိုင်တစ်ခုသာထားရမည်။ start ကိုပေးရမည်။ အောင်မြင်မှုအနည်းငယ်သာသံသယဝင်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည် 🙂
ဒါပေမယ့်သင်ပြောတာကသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ compressed ဖိုင်အတွင်း၌ငါသင်ခန်းစာတွင်ကျွန်ုပ်သတ်မှတ်ထားသောဖိုင်များဖြစ်သည်။
10/08/2012 23:06 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Joseman ၁၆၀ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ movistar မှ galayx s i9000 2.3.6 ရှိပြီး cf-root JVU kernel ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်လို့ရမလား၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ baseband ဗားရှင်း I9000BGJV2၊ Kernel ဗားရှင်း 2.6.35.7-I9000BGJV6-CL783990 root ကိုပံ့ပိုးလျှင်၊ @ DELL132 #2သို့မဟုတ် ၂.၃.၆ JVU firmware ကိုအရင် install လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
Joseman160 ကို Reply
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းငါအကူအညီလိုအပ် ... ။ ကောင်းပြီ, ငါစာလုံးဖို့ခြေလှမ်းများအားလုံးလိုက်နာ, ငါ့ဖုန်းကို Odin ချိတ်ဆက်, စတုဂံပြတင်းပေါက်အဝါရောင်၌၎င်း, ဘေးတွင်နံပါတ်နှင့်အတူကြယ်ပွင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပေမယ့်အနည်းဆုံး2လျှင်တိုးတက်လာ odin မှာရောဖုန်းမှာပါ ... နှစ်ထပ်ကိန်းကြီးသည်အဝါရောင် ၀ င်းဒိုးအထက်တွင် FACTORYFS ၏အက္ခရာများပေါ်လာသည်။ ၁၅ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုမရှိပါ ... ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအတွက်အဖြေကဘာလဲ ???? ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ …။ သင့်ရဲ့အကူအညီကိုစောင့်ဆိုင်းသည်။
MD5 အတွက် CS ရိုက်ထည့်ပါ။
MD5 စစ်ဆေးပါ။ ကေဘယ်လ်ကြိုးကိုမဖြုတ်ပါနှင့် ..
Odin v.3 အင်ဂျင် (ID: 5) ..
Serial port (COM) port ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။
ချည်အားလုံးပြီးစီးပါပြီ (အောင်မြင်ခဲ့သည်0/ အောင်မြင်ခဲ့သည် ၁)
ပြသနာကဘာလဲ?? : S
ယခင် ODIN မူကွဲကသင့်ကိုကူညီခဲ့သလား။ ငါနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ မင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့တာလဲ
သင်ဖိုင်များကိုနေရာချသည့်နေရာတွင်သတိထားပြီးဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လည်လျှော့ချပါ cfroot ကိုအမှတ်အသားပြုသည့်အခါတွင်ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကို ဦး စွာသတိပြုပါ
ပြီးပြီလား ??? အဆင်ပြေလား .. တတ်နိုင်ရင်ငါ့ကိုပြောပြပါ ဦး
ပြီးပြည့်စုံသော update !!! ပြဿနာမရှိပါဘူး။
ပထမ ဦး စွာအချက်အလက်များနှင့်တရားဝင်ရှိနေဆဲဖြစ်သောဆာဗာများပေါ်တွင်ရေးသားခြင်းအလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပြောမယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နာရီလောက်ကငါဆဲလ်ဖုန်းနဲ့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါသေပြီ၊ ရှုပ်ထွေးသွားတယ်၊ ငါပြန်ရှင်လာတယ်။ ငါသေတယ်၊ ​​အဲဒီနောက်မှာငါဟာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့တယ် ... တကယ်တော့သူဟာဖုတ်ကောင်ဖြစ်လာတယ်၊ အရမ်းမြန်တယ်၊ ပံ့ပိုးသူရဲ့ start screen မထွက်လာဘူး၊ ပြီးတော့ I5 ကအရမ်းမြန်တယ်၊ ပြproblemနာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအရမ်းမြန်တယ်။ အရမ်းလွတ်သွားတယ်။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ T_T သည်ကျွန်ုပ်လက်ချောင်းများကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ၎င်းသည် configure လုပ်ရန်အသုံးမပြုသောခလုတ်များသာ 900 စတုရန်းပေ၊ sim check keyboard ထည့်သွင်းခြင်းမပါ ၀ င်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ပြောရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းရှိပါကကျွန်ုပ်ဘာမှနားမလည်ပါ။ _ (
သူငယ်ချင်း၊ ဒီ pass ကဘာလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပေးပါ။
အဆင့်တွေပြီးသွားပြီဆိုရင် "password ကိုအတည်ပြုရန်" တောင်းပါလိမ့်မယ်။
မည်သည့် pass ကိုမျှတောင်းဆိုခြင်းမရှိပါ၊ ဖုန်းကိုသော့ခတ်ထားပါသလား။
Joc Mena ဟုသူကပြောသည်
ငါအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့, အရာအားလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်, ထို post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Joc Mena အားပြန်ကြားပါ
sambung galaxy 500 လို lerus ထုတ်ကုန် ၅၀၀ ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာသတိထားပါ၊
မင်္ဂလာပါ၊ အရာအားလုံးအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဖုန်းကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် 3g ကိုမယူတော့ဘူး။ ငါက apn ကနေ configure လုပ်ပြီး data band ကိုငါ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်။
ကျူရှင်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပထမတော့ cfroot ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ၌ 2.3.6 ရှိပြီးမိုဘိုင်းလ်သေသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ XD သည်ငါ့ကိုကြောက်လန့်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အစကတည်းကသင်ကြားပို့ချခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးမိုဘိုင်းပြန်လည်ရှင်သန်လာသည်သာမကကျွန်ုပ်သည်အမြစ်တွယ်နေပြီ။ အများကြီး🙂
ငါ CF Root ပူးတွဲပါပြီးကျွန်ုပ်ဘာအကူအညီမှမရခဲ့ဘူးဆိုသောပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်ကူးယူခဲ့သော CF Root ဖိုင်ဘယ်မှာလဲ။ is?
ပို့စ်ရဲ့အဆုံးကိုကြည့်ပါ၊ လိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်နဲ့ဖိုင်အားလုံးအတွက်လင့်ခ်တွေရှိတယ်။ သင်ခန်းစာတစ်လျှောက်မှာသူတို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်လည်းပါဝင်တယ်။ သင်ခန်းစာစာလုံးကိုတစ်လုံးချင်းဖတ်ပြီးအကြံဥာဏ်ကောင်းကောင်းဖတ်ပါ၊ အစပိုင်းတွင်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့၎င်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သင်မတိုက်တွန်းပါ။ 🙂
Duduaustin TV ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီးယခု ALAAAAAAAAAAAAAAA တွင်မဖွင့်ပါကဟဲလိုကြားပါ။
Duduaustin Tv သို့ပြန်သွားပါ
CF Root ဆိုတာဘယ် folder မှာလဲ။
သူတို့ကအောက်တွင်ပြောသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်ထိုအဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုအတည်ပြုရန်လည်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ခိုးယူခံခဲ့ရပြီးကုမ္ပဏီက imei အတွက်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကသော့ဖွင့်နေတုန်းငါကအဲဒါကိုမွမ်းမံဖို့စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဖြတ်သန်းဖို့ငါတောင်းဆိုတာပဲ။ တနင်္လာနေ့ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါနေ့အတွက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ငါသော့ဖွင့်ဖို့ ၇၂ နာရီလောက်ကြာပြီဆိုတာကိုပြောခဲ့လို့ငါသော့ဖွင့်လိုက်တယ်။ သော့ဖွင့်သောအခါ cf root နှင့် ics ကိုထည့်ထားနိုင်သလော။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီပြproblemနာအပြင်တခြားအရာအားလုံးကပြီးပြည့်စုံတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ PC သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သောစနစ်ဖြင့်စက်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Odin ကိုဖွင့်လိုက်ရင် COM ဆိုတဲ့စာလုံးကိုတွေ့သလား၊ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ကနံပါတ်တစ်ခုလားဆိုတာစစ်ဆေးပါ။
05/09/2012 04:51 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Sisco ၆၇၀ ဟုသူကပြောသည်
compressed files တွေကိုဘယ် password ကဖွင့်ပေးမှာလဲ
မင်္ဂလာပါ .. ပြaနာရှိနေတယ်။ unzip လုပ်ဖို့ဖိုင်မရှိဘူး
အဆိုပါ unzipped firmware ကို၏ကုဒ်ဖိုင်
နောက်ကျောချ zip ရယူပါ
05/09/2012 19:39 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
နောက်ဆုံးမှာ zip သုံးချောင်းကိုကြည့်ပြီးပြsameနာတူညီတဲ့ပြသနာတစ်ခုထပ်မံထွက်လာပြီးနောက်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ငါဖိုင်တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရပြီ။ လက်ကိုင်ဖုန်းကို Semi-Lock လုပ်ထားပေမယ့် Rom MIUI Jelly နဲ့ဖြေရှင်းပြီးသွားပြီ muchopoli2.8.24 မှ Bean 83 သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ သင်အဖြေအတွက်သင့်ကိုများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤအရာအလုံးစုံကိုမျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
06/09/2012 22:54 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည် - ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ IMEI ကိုအစားထိုးနိုင်မည်လားကျွန်ုပ်၏ EFS ဖိုလ်ဒါကိုဖျက်ပြီး၎င်းနှင့်အခြားတစ်ခုသို့မဟုတ်အစားထိုးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဆိုပါက -
ကျွန်ုပ်မေးခွန်းကဒီသင်ခန်းစာမလေ့လာမီ efs ကော်ပီမလုပ်ခဲ့သောကြောင့် (ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အကြောင်းအနည်းငယ်သာပြောပြသည်အထိမသိခဲ့ပါ) ယခုမိုဘိုင်းသည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အား roaming ကိုအသုံးပြုနေသကဲ့သို့မှတ်ထင်နေသည်။ ကျွန်တော့်နိုင်ငံမှမဟုတ်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ထည့်လိုက်သောကုမ္ပဏီက (KOR) ၏ပြောသံကို kies မှသတိပြုမိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ IMEI သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးယေဘူယျအားဖြင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသလား။
ငါသူတို့ထည့်သွင်းလိုက်သောခြေလှမ်းများကိုလှမ်းလိုက်သည်။ PASS စကားလုံးအားလုံးပြီးသွားသောအခါ ODIM3 ကိုကျွန်ုပ်ရသောအခါ၎င်းကိုပိတ်ထားသည်။
ငါ့ဖုန်းကဆံပင်၊ ဆံပင်၊ ဒီဆံပင်လို့ငါ့ကိုအရိုးအိုးလို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး
ဦး လေးကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အဲဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်တော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်။ explained အားလုံးကိုကောင်းစွာရှင်းပြသည်😉 greetings makina!
Pryrates များ ဟုသူကပြောသည်
ငါ Odin သုံးပြီးပြီးနောက်မှီဝဲရ။ "PASS" အရာပေါ်လာသည်နှင့်မိုဘိုင်းသည် ပြန်လည်စတင်၍ အရာများကိုစတင်ထည့်သွင်းသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တစ်ခုစီအားတစ်ခုစီသည်အနီရောင်အက္ခရာများနှင့်တူ။ drive E ပေါ်တွင် "mount fail" ဟုခေါ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မှားယွင်းစွာပြုမိခဲ့သည့်အဆင့်အချို့၊ ပထမအဆင့်တွင်ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီးဒုတိယတွင် CFRoot မပါ ၀ င်ပါ။
ဒီတပ်ဆင်မှုဟာဒီမော်ဒယ်အတွက်တရားဝင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (GT-9000t) ????
11/09/2012 05:30 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာက galaxy S. ပါ။ ငါစာကိုသင်ခန်းစာပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်မိုဘိုင်းကိုစတင်ဖို့အချိန်တော်တော်ကြာတယ်၊ gmin ထဲမှာ ၅ မိနစ်ကျော်နေတယ်။ ငါ့ကိုအင်တာနက်နဲ့မဆက်သွယ်ဘူး။
မင်္ဂလာပါအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ပြသနာက touch screen နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှေးကွေးနေတာပါ။ ဒါကဒုတိယအချက်ကိုကျွန်တော်တုံ့ပြန်ပြီးအနည်းငယ်လုပ်ပြီးနောက် ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
ငါခြေလှမ်းအားလုံးကိုလှမ်းပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်မှာ SGS I9000 ရှိပြီးဖြစ်ပြီး 2.3.6 မှာ root install လုပ်ပြီးသားပါ။
ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောပြသနာမှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်တိုင်းခေါ်ဆိုမှု၏အဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါအမှားကိုရရှိသည် - "com.andorid.phone လုပ်ငန်းစဉ်သည်မမျှော်လင့်ဘဲပြတ်တောက်သွားသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ" ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တွင်အကျုံး ၀ င်မှုမရှိပါ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အဘို့။ Bluetooth ကကျွန်တော့်ကိုပြproblemsနာဖြစ်စေတယ်၊ ​​အဲဒါကတခြားစက်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။
13/09/2012 22:54 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ငါစက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်မှုပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဒီအမှားကိုဆက်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဂြိုဟ်တုတွေကိုရှာပြီးဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ Bluetooth နဲ့ gps မှာပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊
မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ငါ၏အမှု၌, ငါကခဏ left နှင့်ဘာမျှမကစွန့်ခွာနှင့်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူဆွဲထားကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်ကိုဖွင့်မထားဘူး?
ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ ဦး ။ မရေးခင်ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်များနှင့်တစ်ခုထက်ပိုပြီးဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်းအဖြေမရခဲ့ပါ။
download mode သို့ပြန်သွားပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာတွင် driver များတပ်ဆင်ထားပါစေ
18/09/2012 13:05 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းက Galaxy S I9000T အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
20/09/2012 21:35 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ငါမှီဝဲမိပါတယ်ဘယ်မှာ2အချိန်လေးရှိခဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ:
၁. Firmware ကို odin နှင့်ထည့်သောအခါအလုပ်ကမပြီးပါ။ နောက်ဆုံးမှာအဆိုးရွားဆုံးကိုကြောက်နေရင်၊ ငါဖုန်းကိုဆက်သွယ်လိုက်ပြီးသင်မှတ်ချက်ထဲမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်း odin နောက် version တစ်ခုကိုစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ အဲဒါပြီးပြည့်စုံတယ်
CF root ထည့်သွင်းမှုတွင် unzipped ဖိုင်ကို PDA တွင်မထည့်ဘဲထားရန်ကြိုးစားသည်။
အဆုံး၌, တစ် ဦး အောင်မြင်မှု။
ကောင်းပြီသူငယ်ချင်း၊ ငါလုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ အခုငါ့မှာမျက်နှာသော့ဖွင့်ထားတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Yorch Jape ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ မေးခွန်း၊ ကျွန်ုပ်သည် download mode ၌ရှိနေစဉ်၊ ဆဲလ်ဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါ၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည်လုံးဝမတိုးတက်ပါက sbl.bin အစိတ်အပိုင်းတွင်ရှိနေသော်လည်း၎င်းသည်ခဏတာဖြစ်သော်လည်းတိုးတက်မှုမရှိပါကကျွန်ုပ်ဘာကိုမေးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ???
Yorch Jape အားပြန်ပြောပါ
၎င်းကို download mode သို့ပြန်ထည့်။ ထပ်မံကြိုးစားပါ
23/09/2012 08:46 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Arturo Camejo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကောင်းသောနေ့၊ မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၊ မင်းဟာငါ့ဘဝကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုတင်လိုက်တယ်၊ ငါသေပြီလို့ငါထင်တယ်၊ လူတစ်ယောက်ကမင်းနဲ့ post တူတူတင်ချင်ပေမဲ့ csc မပါခဲ့ဘူး၊ အလွန်ဆိုးဝါးသောဖုန်း။ ကျွန်ုပ်သည် cfroot မှနောက်ဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်အားထင်ရှားပေါ်လာသောထိုအပလီကေးရှင်းနှစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသိလိုပါသလား။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ဖုန်းကို 3g ကိုဘယ်လိုယူမလဲ၊ အင်တာနက်ကကျွန်တော့်ကိုမဖမ်းပါဘူး။ ဗင်နီဇွဲလားကပါ။ digitel တစ်ခုရှိတယ်။
Arturo Camejo အားပြန်ပြောပါ
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများကိုရိုက်ထည့်ပြီး apn ကိုပြုပြင်ပါ။ အကယ်၍ သင်အချက်အလက်များကိုမသိပါကသင့်ကုမ္ပဏီမှသင့်အားပေးလိမ့်မည်
29/09/2012 11:09 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ဂျူလီယန် Steinburg ဟုသူကပြောသည်
ဒီ tutorial က Samsung Galaxy S Pus အတွက်အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ GT-I9001
Julian Steinburg သို့ပြန်သွားပါ
မထည့်သွင်းပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ samsung galaxy gt-i9000 ဖြင့် ပြုလုပ်၍ ၎င်းသည်မဖွင့်ပါ !!!!
မွမ်းမံခြင်းမပြုမီမှတ်ချက်များကိုဖတ်ပြီးသူတို့ထဲကအများစုဟာ bug တွေအများကြီးအကြောင်းပြောကြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကအရာအားလုံးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမိုဘိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြproblemsနာမရှိဘဲအာရုံကြောနည်းနည်းနဲ့မွမ်းမံပြီးပြီဆိုတာကျွန်တော်ရေးပါတယ်။ သံသယဝင်သူများအတွက်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသင် STEP-BY-STEP ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါက၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။
Francisco ကအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှု၊ သင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ သင်ခန်းစာအတွက်မည်မျှလွယ်ကူ၊ ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်မှုရှိသည်ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
PS: ယခုငါစက္ကူအလေးချိန် ၂၀၀၀ အာဂျင်တီးနားပီဆိုတွင်ရှိသည်
သင်ပြောသည့်အတိုင်းဆဲလ်ဖုန်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ပြတ်တောက်သွားသည်၊ စာမူကိုသင်ဖတ်လျှင်မည်သည့် terminal model အတွက်ဖြစ်သည်ကိုသင်သဘောပေါက်မည်ဆိုပါကသင်အနေဖြင့်အရာအားလုံးကိုဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏အမှားများအတွက်အခြားသူများကိုအပြစ်တင်ရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်။ အဲဒီလိုပြောပြီးငါ့ရဲ့ဆန္ဒကောင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့၊ မင်းမှာရှိတဲ့ terminal တစ်ခုရဲ့သတ်သတ်မှတ်မှတ်မော်ဒယ်ကိုပြောပြရင်ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမြင်လိမ့်မယ်။
Anthony Jimenez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်က Firmeware ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရာတွင် CFRoot နှင့်အတူတူဖြစ်သည်ကိုသိပြီး decompress လုပ်၍ zImage ဆိုသောဖိုင်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ အဘယ်သူသည်ငါ့ကိုကူညီနိုင်သနည်း
Antonio Jimenez ကိုပြန်ပြောပါ
သင်ဒီအဘို့အဖြေတစ်ခုတွေ့ပြီ ??? ငါကြိုးစားနေပေမယ့်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲမသိဘူး
ဒါဟာငါအတိအကျအတူတူဖြစ်ပျက်။ CFRoot ဖိုင်နှင့် Firmware အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မည်သူမဆိုမှန်ကန်သော Firmware (သို့) ပို့စ်ဖန်တီးသူကို upload တင်နိုင်ရင်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ၄ လခန့်က ၂.၃.၆.၂ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးယခု ၄.၁.၄ ကိုထည့်ရန် CFROOT ၏တိုက်ရိုက်အဆင့်သို့ကူးသွားသည်။ ပြသနာမှာအိမ်မျက်နှာပြင်တွင်ရှိနေခြင်း၊ samsung i2.3.6 ကိုဖွင့်ပြီးပိတ်သည်။ သင်ငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်မလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်း xxjvu ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းရန်အဆင့်များကိုပြုလုပ်ပြီးပြီ။ root မလုပ်နိုင်လျှင်၊ ခလုတ်သုံးခုကိုငါလုပ်ပြီး၎င်းသည် recovery mode3မှထွက်လာပြီး download mode သို့မည်သို့ပြန်သွားနိုင်မည်နည်း။
အဘယ်သူမျှမ dude, ဒီ GT-I900 အဘို့ဖြစ်၏။
ဒီ firmware သည် 9000t နဲ့အလုပ်လုပ်ပါသလား။ အမြစ်လို
မဟုတ်ဘူး I9000 အတွက်ပါ
မင်္ဂလာပါအလွန်ကောင်းသောပို့စ် !! ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်တယ် !! yoigo version 2.3.3 လိုပဲဖုန်းကိုစွန့်ခွာပြီး root ကိုရပ်တန့်ချင်တယ်။ က SAT များအတွက်ကောင်တာဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်လျှင်။ ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်မှာလဲ ???
အကယ်၍ သင်သည် 2.3.6 JVU ဗားရှင်းကိုနောက်တစ်ကြိမ် flash လုပ်ပြီး CFRoot အစိတ်အပိုင်းကိုမပြုလုပ်ပါက၎င်းကို SAT သို့ပေးပို့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီဗားရှင်း Kies ထံမှperfectlyုံ upgradeable ဖြစ်ပါတယ်။
Internal sdcard တစ်ခုလုံးကို blanket သုတ်ရန်သေချာပါစေ။
ဒီတော့ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဗားရှင်း ၂.၃.၆ ကိုသွင်းခဲ့သလို CFRoot မလုပ်ပဲနဲ့? ငါနည်းနည်းပျောက်နေတယ်
အတိအကျဆိုသော်လည်း၎င်းသည် device ၏ internal memory ကိုလည်းရှင်းလင်းပေးသည်
Maxy romero ဟုသူကပြောသည်
ငါ Post ကိုဖော်ပြသကဲ့သို့အရာအားလုံးကို install လုပ်ခဲ့တယ်, ငါ့အဘို့အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ထို့နောက်ငါ APNs ကိုငါဒေသခံအော်ပရေတာဖြစ်သည့် Orang Israel ၏အဆိုအရ configure နှင့်အရာအားလုံးအလွန်ကောင်းစွာသွားလေ၏။
Maxy Romero အားပြန်ပြောပါ
အလှူငွေများအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အရာရာတိုင်းပြီးပြည့်စုံပါသည်။ အခုငါရေခဲမုန့်ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ။
Jelly Bean Android 2.5 ဖြစ်သော Tsunami X4.1.2 အတွက်ဘလော့ဂ်ကိုရှာဖွေပါ။ ဒါဟာယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံး rom ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုမပြောင်းချင်သောကြောင့်၎င်းသည်အသစ်ဖြစ်သောကြောင့်အခြားရာသီအတွက်လည်းရှိသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် !!!
ယခု၎င်းကို Tsunami X2.5 rom ဖြင့် Flash လုပ်လိုက်ပါ၊ ၎င်းသည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိသောနောက်ဆုံးပေါ် Android version သို့ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကံတရား _၂၉_၉၄ ဟုသူကပြောသည်
မအောင်မြင်တာကိုငါမသိပေမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးအစိမ်းရောင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုရလာတယ် ('logo ။ jpg' draw မအောင်မြင်ပါ)၊ ဒါကိုငါဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ။
ငါရှာမတွေ့သောဖိုင် modem နှင့် csc ဘယ်မှာရသနည်း။
Sosoacapo !!!
Iddo Jose Claros ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ ... ငါမေးစရာတစ်ခုရှိသည်။ (ကျွန်ုပ်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်သော Galaxy S i9000) အဆင့်ဆင့်ကိုအပြည့်အ ၀ လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ။ Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်သောအခါအလွန်ရှားပါးသော bug တစ်ခုရှိနေပြီး၎င်းကိုပြန်လည်စတင်သည်။ အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဆက်သွယ်မှု ... ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဝိုင်ဖိုင်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးဖြတ်ထုတ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒေါင်းလုပ်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ YouTube ဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုတွင်ပင်ပြောပါ။ ၎င်းသည်အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ... တစ်စုံတစ်ယောက်က၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိလျှင် ... ကြိုတင်၍ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Iddo José Claros အားပြန်ပြောပါ
မင်းရဲ့ tutorial အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါကံမကောင်းအုတ်ပြီးနောက်ငါ့ Vibrant ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့သည်။
ငါ PDA အပိုင်း၌ CF Root (zImage) ၏ unzipped ဖိုင်ကို PDA အပိုင်းတွင်မဖွင့်နိုင်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုဖိုင်တွဲထဲတွင်ရှိနေသော်လည်းမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။
သငျသညျအချို့ extension ကိုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုထားရန်ရှိသည်။
ကောင်းတယ် ငါအရာအားလုံးကိုသင်ခန်းစာအဖြစ်လုပ်ခဲ့ပြီးငါ့ရဲ့ i9000 ကို update လုပ်ပြီးသား
တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုကူညီနိုင်လျှင်, 4shared စာမျက်နှာကနေ firmware ကိုသို့မဟုတ် cfroot ကို download လုပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိ ...... ။
cf-root gt-i9000b အတွက်အလုပ်လုပ်သည်
အကုန်လုံးကိုအက္ခရာတပ်လိုက်တယ်။ restart ပြန်လုပ်လိုက်ရင် screen ကမှေးမှိန်သွားပြီ၊ အခုမဖွင့်ဘူး၊ ငါ galaxy s i9000 …။
ဖြေရှင်းနည်းလား : /
FANTASTIC, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ညွှန်ကြားချက်များကိုဂရုတစိုက်လိုက်နာပြီးတပ်ဆင်ထားပြီး terminal ဟာအပြည့်အဝလည်ပတ်ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းတယ်၊ ငါပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ မင်းပြောခဲ့သလိုပဲအရာအားလုံးထွက်ပေါ်လာတယ်။ မင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်အဲဒီလိုဆက်လုပ်ပါ၊ နောက်လိုက်တစ်ယောက်ရှိနှင့်ပြီ။
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်။ သင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါမှာတက်ဘလက် galaxy s မော်ဒယ် yp-g70 ရှိတယ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ့်အစား၎င်းသည် samsung လိုဂိုနှင့်အတူအနက်ရောင်ဖန်သားပြင်တွင်ရှိနေမည်။ ဒါကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းလို့လား
ကြည့်ပါ၊ အရာအားလုံးကိုထပ်မံကြိုးစားရန်လိုအပ်ပြီးဤတစ်ကြိမ်တွင် 2.3.6 reition partition ကို odin တွင်ပြန်ထားပါ။ dowload mode သို့မရောက်မှီသင့် galaxy s ကိုမဖြုတ်ဘဲခဏစောင့်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားဘာသာစကားတောင်းပြီး၎င်းကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Xpressa-t ကို ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အဆင်သင့်တပ်ဆင်ထားပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည် ၁၀ မိနစ်ထက်ပိုကြာပြီး sbl အရာသည် odin တွင်ဆက်လက်ရှိနေပြီးနောက်ဆုံး command ကိုမတိုးပါ။ အဆင့်များကိုစစ်ဆေးပြီးယခုဖုန်းသည်ရှေ့သို့မတက်နိုင်ပါ။ Samsung Galaxy gt i10t သည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မည်၊ km kitar ကိုပြောနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်ဖုန်းကိုဆက်လုပ်နိုင်ပါ။ ya ke ya panikie me
၎င်းသည် GT-I9000T အတွက်မဟုတ်ဘဲ GT-I9000 အတွက်ဖြစ်သည်
Crixuz ဂိုး ဟုသူကပြောသည်
firmware ၏အဆိုအရ i9000t နှင့် i9000 မော်ဒယ်များအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခြင်းနှင့် firmware ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ငါမှားနေပြီလားငါရဲ့မူလ xk firmware ကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲ၊ ငါ့ဆဲလ်သေပြီဆိုတာသိလား
Crixuz Gore အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
Hello Francisco Ruiz ။ ငါသင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသင် btal tutorial ကိုလိုက်ခဲ့ပေမဲ့ငါမှာ xpressa t လိုပြhaveနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ sbl ကျော်လွန်သွားသည်မဟုတ်။ ငါ့အသင်းသည် GT I9000 ... ကျွန်ုပ်သည် မင်းကိုငါ့ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ! !!
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ စာကိုနောက်ဆက်တွဲ လိုက်၍ ပြwithoutနာမရှိဘဲအစတွင် odin သည်မအောင်မြင်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်သူရခဲ့သည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။
အဆိုပါ tutorial ကိုအောက်ပါပိုးလိုပဲ။ ကျွန်ုပ်သည် Froyo မှ Rom Manager နှင့်တိုက်ရိုက် update လုပ်ရန်အခက်အခဲရှိခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည် Gingerbread သို့ယခုတင်ပို့နိုင်ပါပြီ။
Norman i9000t ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာ i9000t သက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်သည့်အခါအဝါရောင်လိုင်းသည်အနည်းငယ်သာတိုးတက်လာပြီးအကြံပြုချက်အချို့ကိုပြန်လည်စတင်သည်။
norman i9000t အားပြန်ပြောပါ
Javier Alive ဟုသူကပြောသည်
ဟင် Francisco၊ ငါမှာ GT-I9000 ရှိတယ်၊ ငါခြေလှမ်းတွေကိုလိုက်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ရတာကဖုန်းကို PC နဲ့ပထမဆုံးချိတ်ဆက်တဲ့အခါ donwload mode မှာမဟုတ်ဘဲ COM 1 ကိုရပြီ။ COMs ။ ငါ START ကိုပေးပြီး ၁၀ မိနစ်ကျော်အကြာတွင် COM3သည်လွတ်နေဆဲဖြစ်ပြီး COM10 နှင့် COM0 က FAIL ကိုပေးသည်။ သူတို့မှာကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းကို PC နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မဝံ့ဝံ့၊ စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ မင်းအဖြေ
Javier Vivo အားပြန်ကြားပါ
Odin v.3 အင်ဂျင် (ID: 15) ..
Odin v.3 အင်ဂျင် (ID: 9) ..
Odin v.3 အင်ဂျင် (ID: 8) ..
ဒရိုင်ဘာများကိုတပ်ဆင်ပြီးမိုဘိုင်းကိုဒေါင်းလုပ် mode ဖြင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်။
21/12/2012 01:28 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ငါ .83 ကို .82 သုံးပြီး .4.1.1 ကိုသုံးပြီးဖြေရှင်းလိုက်ပြီ၊ အခုငါ Jelly bean XNUMX rom ကို install လုပ်တယ်၊ ဖိုင်တွေကိုဖုန်းထဲကူးထည့်လိုက်ပြီ၊ install လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အချိန်တော်တော်ကြာနေပုံရတယ်၊ \_ t မဟုတ်လား ငါဖန်သားပြင်ပေါ်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာ gargoyle ရှိသည် ...
samsung GT-I9000b အတွက်အလုပ်လုပ်သည်
Francisco က - ငါ့ရဲ့ Nexus4လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြီးတာနဲ့ငါ Galaxy S ကိုယူပြီးအမြစ်ကိုထိုးလိုက်တယ်။ သင်၏ညွှန်ကြားချက်များသည်မအောင်မြင်ပါက ၁၅ မိနစ်အတွင်း။
ယခုငါ Ginger ဗားရှင်းကိုဖြစ်နိုင်လျှင် 4.2.1 ကို Nexus နှင့်နှိုင်းယှဉ်ချင်သည်။ မလိုအပ်ဘဲသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်။
RemICS-JB V1.0 ထည့်သွင်းရန်သင်ခန်းစာကိုလိုက်နာပါ
၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်၊ ည ၈း၁၄ တွင် Disqus ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -
တစ်ရက်စမ်းသပ်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် nexus4 ကို ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ နဂါးငွေ့တန်းသည်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်ပါသည်…………… .. သင် Oviedo သို့လာလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုထိပါ၊
09/01/2013 18:55 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ဟယ်လို။ ဒါကမှန်ကန်တဲ့အရာလားဆိုတာမင်းငါ့ကိုပြောနိုင်တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟစ္စကိုချယ်ရို၊ ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ခန်းစာယူလိုက်ပြီးဖုန်းကို restart လုပ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစကားဝှက်တောင်းရန်တောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Tami Esp ပြန့်နှံ့ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီး၊ ငါ့ရဲ့ I9000 ကိုပြန်ရတယ်။
Tami Esp Spread သို့ပြန်သွားပါ
အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း။ သင် Andalusia ကိုသွားတဲ့အခါသင့်မှာဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ပွေ့ဖက်
ကောင်းပြီငါသည်လည်းစာကိုပြု၏ယခုငါမဆိုဖြေရှင်းချက်ကွန်ယက်ကိုလွှမ်းခြုံမရပါ။ terminal ကို vodafon နှင့် imei မှဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
သင်၏ကုမ္ပဏီအချက်အလက်နှင့် APN များကိုပြုပြင်ရမည်။
သငျသညျဤကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ကွန်ယက်အတွင်းတွေ့လိမ့်မည်။ အချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းသို့မဟုတ် Vodafone သို့ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
12/02/2013 02:00 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ galaxy si 9000 ရှိတယ်၊ firmware version 2.3.6 Gingerbread ကို update လုပ်တယ်။ ဒီဖုန်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ version ရှိသလား။
Serch martinez ဟုသူကပြောသည်
Serch Martinez အားစာပြန်ပါ
download mode မှအပြာရောင်ဘားသည်ပြောင်းလဲသလား၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို disconnect လုပ်ရန်အခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာနှင့်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါကကျွန်ုပ်စာအားအရာအားလုံးပြုခဲ့သည်
Manme Malaga ဟုသူကပြောသည်
olle သည် sbl.bin ၏မိတ်ဆွေတွင်ရှိနေပြီးဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ
ငါဒီဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနင့်ကိုအခြားတစ်ဖက်မှာအမြစ်တွယ်အောင်ကြိုးစားပြီးကတည်းကငါနဂါးငွေ့တန်းကိုအုတ်ကနေမကယ်တင်နိုင်ခဲ့လို့အမြဲတမ်းပြန်လည်စတင်နေပြီ၊ အခုအသစ်ဖြစ်နေပြီ။
ငါ့မှာ samsung i9000b ရှိတယ်၊ ဒါကအလုပ်လည်းလုပ်သလားသိလား။ ဒီ Celu အတွက်ပစ္စည်းသိပ်မရှိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးတက် add ကူညီပေးသည် !!!!
ငါ post ကိုအညီခြေလှမ်းများလိုက်နာပေမယ့်ငါ့ဖုန်းကို restart လုပ်တဲ့အခါမှာသူကစာသားလယ်ပြင်တွင်အသာပုတ်ပါရန်ငါ့ကိုတောင်းခံ On-screen ကိုကီးဘုတ် setting ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာမှမသွားဘဲရှိနေသည် မျက်နှာပြင်ထိလက်မခံပါဘူး
သင်၏ terminal ၏အတိအကျပုံစံကားအဘယ်နည်း။
၎င်းသည် GT-I9000B မော်ဒယ်ဖြစ်သည်
sammobile.com သို့ သွား၍ GT-I9000 အတွက်သင်ခန်းစာမော်ဒယ်နှင့်လိုက်ဖက်သော firmware ကိုကူးယူပါ။
အိုဖရန်စကို၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ site မှသဟဇာတ firmware ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
ဟိုင်းလို့စ်၊ သင်သည် On-screen ကီးဘုတ်ချိန်ညှိချက်များတွင်မျက်နှာပြင်ကိုပြုပြင်ခဲ့သလား။ ငါမှာ 9000b မော်ဒယ်တူတူပဲ၊ ငါဒီရွေးစရာမှာပဲနေခဲ့တယ်။ ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဤပစ္စည်းသည် i9000 အတွက်မဟုတ်ဘဲ i9000B အတွက်ဖြစ်သည်
04/04/2013 04:49 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသို့ဖတ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစကားဝှက်တောင်းရန်တောင်းဆိုသည်၊ ၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုပင်ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အကယ်၍ ဖုန်းပိတ်ဆို့ထားပါကအဖြေအချို့ရှိသည်။
ငါ sim ကိုဖယ်ရှားပြီးသင်ညွှန်ပြသကဲ့သို့ခြေလှမ်းများအားလုံး exo ငါစကားဝှက်ကိုအတည်ပြု
က Nicolas အေ Ferreyra ဟုသူကပြောသည်
ငါအရာအားလုံးကိုအပြည့်အဝ install လုပ်တယ်၊ ငါ့မှာရေးသားဖို့ pad မရှိဘူး၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
Nicolás A. Ferreyra ကိုပြန်ပြောပါ
04/04/2013 01:03 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Galaxy S GT-I9000 ပါ။ မျက်နှာပြင်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော့်အတွက်ပါ
ဟယ်လို!! ငါထုတ်ကုန်အသစ် Roteado, ပြုပြင်ထားသော Recovery ရှိသည်ဖို့မရနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Android 2.3.6 ရှိ Galaxy S ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ် CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS ဖိုင်ကိုကူးယူပြီးသင်ညွှန်ပြသည့်အဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာသည်။ မှန်ကန်သည်ဟုထင်ရသည်၊ သို့သော်မိုဘိုင်းကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါငါ တူညီသောတြိဂံဖန်သားပြင်ကိုသာထွက်သင့်သောရွေးချယ်စရာများရှိသောမီနူးကိုသာရယူပါ။ ငါဘာမှားနေတာလဲ ???
မင်းကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ၊ မင်းမှာပြproblemsနာမရှိဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပြန်လည်နေရာချထားမှုအမှတ်အသားမရှိဘူးဆိုတာသတိပြုပါ။
06/04/2013 22:07 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သင်ခန်းစာလိုအရာအားလုံးကိုလုပ်ပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့မိုဘိုင်းအမြစ်တွယ်ပြီးကတည်းက CF-Root ကိုမထည့်ဘဲ၎င်းကိုကျွန်တော်မထည့်သွင်းပါ။ ဒါပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားတဲ့အခါဖုန်းကို restart လုပ်တဲ့အခါမှာ code ကိုတောင်းပြီးငါ့ကိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ ငါ faa အတွက်အကူအညီလိုတယ် !!!
ဒါကဘာ model လဲ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 12ပြီလ ၂၆ ရက်ညနေ ၅း၃၆ တွင်၊
နဂါးငွေ့တန်း s i9000
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!! ငါဖုန်းကို imei မှပိတ်ဆို့ထားပြီးဖုန်းခေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံခြင်းလုံးဝမလုပ်နိုင်ပါ။ မယုံနိုင်စရာ odin မှတဆင့်ဖုန်းကို update လုပ်ပြီး cf root ကို install လုပ်ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သော့ဖွင့်ပြီးအသစ်ဖြစ်နေပုံရသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် !! 🙂
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တို tutorial တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပြီးအားလုံးမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ပြန်လည်စတင်ခြင်းပြုလုပ်တော့မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်ကိုစကားဝှက်တောင်းသည်။
ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ငါ Galaxy S. အမြောက်အများကိုအရောင်တောက်စေခဲ့သည်။
ငါနဲ့အတူတူပါပဲဖြစ်ပျက် .. fixed ခဲ့သလဲ
ငါလုပ်သောဤလမ်းအတွက် 1/2 နာရီကြာ! ss plss ကိုကူညီပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါသည် ! ! !
usb output ကိုပြောင်းပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံပြthereနာရှိနေပါသည်
Zito Moreno ဟုသူကပြောသည်
ငါနှင့်အတူတူပါပဲ၊ terminal ပြောင်းပြီး၊ pc ကိုပင်ပြောင်းလဲသွားသော်လည်းကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။
Zito Moreno အားပြန်ပြောပါ
galaxy s i9003l နဲ့သဟဇာတလား။ ငါစတင်ရန်အစီအစဉ်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီ! အရမ်းကြောက်တယ်
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအားကြိုးစားရန်စဉ်းစားမထားပါနှင့်သို့မဟုတ်သင် terminal ကိုသင်ဖွင့်နိုင်သည်
21/04/2013 18:49 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Tony oropeza ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့စာရေးသူကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ BlackBerry စက်ပစ္စည်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော့်အတွက်အမြဲလိုလိုပုံမှန်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ရန်အလိုအလျောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ဗင်နီဇွဲလားဈေးကွက် iPhone နှင့် Samsung သို့ပြောင်းလဲနေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တိုးချဲ့ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် update ကိုပြုလုပ်ရန်ကလေးသို့မဟုတ်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ရှင်းပြရန်သင်ကြားမည့်သင်ခန်းစာကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်သည်ဤသင်ခန်းစာကိုရရှိခဲ့သည်။ ညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်နာခြင်းနှင့်ဤသင်ခန်းစာအစတွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပြီးကျွန်ုပ်အတွက်လည်းပြီးပြည့်စုံသော GT-I9000 ပုံစံကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ထင်ရှားသည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျူရှင်ကိုသူ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအသေးစိတ်ရှင်းပြချက်အတွက်တစ်ဖန်ကျေးဇူးတင်လိုပါသည်။ လျှောက်လွှာတစ်ခုချင်းစီ၏ update ကိုတိတိကျကျနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ကျေနပ်လောက်ပါသည်။ Salu2 မင်းကိုငါအကြိုက်ဆုံးထဲမှာရွေးထားပြီးဖြစ်သည် espro posting ဆက်လက်။
Tony Oropeza သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါမှငါတို့အားလုံးနောက်ပိုင်းမှာပျော်မွေ့နိုင်မှာပါ။
ကျွန်ုပ်၏ i9000 android version ကိုအဆင့်မြှင့်ချင်ပါသည်။ သို့သော်အဆင့်များအတိုင်းမလုပ်ဆောင်မှီကျွန်ုပ်က version 2.2 froyo.xwJPF ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်မလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်အခြားဗားရှင်းသို့ ဦး စွာပြောင်းပြီးဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာသင့်ပါသလား။ မိုဘိုင်းသည် Yoigo မှဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် flash သို့မဟုတ် root သို့ဘာမှမထိပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် Root and ClockWorkmod Recovery နှင့် Kernel ကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်၏ galaxy s ကိုမည်သို့ update နိုင်မည်နည်း။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ် install လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဖြေကိုစောင့်ပါ။
alberto solis သို့ပြန်သွားပါ
Juan Carlos Lara ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့အကူအညီလိုတယ် အက္ခရာဆီသို့အရာအားလုံးရှိနေပြီးဖုန်းစတင်ဖွင့်သောအခါဖန်သားပြင်မှအပကျန်အရာအားလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ငါ့ဖုန်းမကောင်းဘူးလား ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်အကူအညီလိုချင်ပါတယ်
Juan Carlos Lara ကိုပြန်သွားပါ
ဒီကိစ္စကို i9000B မှာလုပ်လို့ရလားသံသယရှိမိလား။
မြေပုံအတွက် PIT ရယူပါ။
အဲ့ဒီမှာ odin ရှိနေပြီးငါ abansa မရှိဘူး၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
Hello Francisco, ငါဒီသင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြီးပြီ။ အစီအစဉ်မှာပါတဲ့အဆက်အသွယ်တွေဆုံးရှုံးသွားတာကလွဲလို့အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ ရှေ့ဆက်မသွားခင်မှာအဆက်အသွယ်မိတ္တူတခုကိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုမညွှန်ပြဘဲ၊ သင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဝံ့ဝံ့သောနောက်လူများအတွက်ဤအညွှန်းကိုထည့်သွင်းပါကကောင်းသည်။
ဟယ်လိုဖစ္စကို၊ မင်းကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ် ငါပြaနာရှိနေတယ်၊ ​​ပထမလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာငါ့ကိုချိန်းတယ်၊ ငါ ၁၅ ကြိမ်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဒီဖြစ်စဉ်က ၅၁ မိနစ်ကြာပါတယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုဘောလုံးထဲမှာရိုက်ချင်တယ်
ကူညီပါ၊ ဖုန်းနက်နေပြီ၊ dowloader (သို့) recovery mode သို့မသွားဘူး၊ charger ကိုမကိုင်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ install လုပ်လို့မရဘူး
Carlos Alberto Esis ကိုပြန်ပြောပါ
ဘထွေး Ed ဟုသူကပြောသည်
ဘထွေး ed မှပြန်လည်ဖြေကြားသည်
ဖရန်စစ္စကို, နေ့လည်ခင်း၊ ငါခြေလှမ်းအားလုံးကိုလှမ်းပြီးပြီ၊ ကြယ်ပွင့်ကိုပေးပြီး ၂ မိနစ်အတွင်းကျရှုံးခဲ့ပြီ။ in odin in ငါထပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာပြတ်တောက်သွားသည်ကိုမိုဘိုင်းတွင်တွေ့ရသည် ငါဘာလုပ်နိုင်လဲ ??
ငါမှန်ကန်စွာ update လုပ်ပါပြီအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ညွှန်ကြားချက်များperfectlyုံရှင်းပြသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
MILLL EXELENTEEE ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။ ငါပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ၊ install လုပ်ရန်အတွက် i9000b ၏ galaxy s iXNUMXb သည် ??
Mark Anderson ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်ုပ် samsung galaxy y young ကို firmware ကို update လုပ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ အကြောင်းရင်းများ X အတွက်၎င်းကိုမွမ်းမံရန်အဆုံးနီးပါးတွင်ရုတ်တရက်ပိတ်သွားသည်၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ မဖွင့်ဘူးလား : S
မေးခွန်းတစ်ခု - android 9000 froyo.xwjpf ဖြင့် galaxy gt i2.2 ကို root လုပ်ရန်မည်သည့် cf-root ကိုကျွန်ုပ်သုံးသင့်သနည်း။ အထူးသဖြင့်ဖိုင်ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။
ထိုပုံစံတူ gingerbread.xwjw2.3.6 ဖြင့် android9ကိုအသုံးပြုပါသလား။
Carlos Seville ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခြေလှမ်းတိုင်းကိုလိုက်ပြီးပြproblemsနာမပြေလည်ပါဘူး။ မေးခွန်းတစ်ခုအခုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်မြန်ဆန်စွာမဆက်သွယ်မီအသံသွင်းထားခြင်းနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ အဲဒါကိုပြောင်းလဲလို့ရမလား။ ၄ င်းတို့ကိုအချိန်တိုင်းကိုသက်ဝင်စေဖို့ကွန်ယက်တွေထဲ ၀ င်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။
carlos sevilla အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် firmware version 2.3.6 ကို install လုပ်ထားပြီးပါပြီ။ သို့မဟုတ်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် CF root မှသာလျှင် ???
CFRoot မှစတင်၍ သင်၌လုံလောက်သည်။
ဟေ့သူငယ်ချင်း၊ ငါ galaxy pocket gt-s5301l android ics ရှိတယ်။ ပြီးတော့ငါ့ဖုန်းကို firmware ကို install လုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းလား။ ငါက firmware installation အစိတ်အပိုင်းမှာလား၊ မတူလား။
Markitos လိုပက်ဇ် placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်သင်တို့ကို GT-i9000b နှင့်အတူ post တစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Markitos Lopez အားပြန်ပြောပါ
Rhider rixter ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Francisco Ruiz ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်တွေကြောင့်မင်းရဲ့ Galaxy S I9000 ကိုပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တရုတ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုနဲ့လုပ်တဲ့အမြစ်ကမြန်ပြီးလုံခြုံတယ်။ ပီရူးမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Rhider Rixter အားပြန်ကြားပါ
ငါဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ့ galaxy s I9000B ကိုဘယ်လိုဖွင့်လို့ရမလဲ။ ငါ recovery mode သို့မသွားနိုင်ပါ။ သို့သော်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သော ......
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ Francisco ။ ငါသည်သင်တို့ကိုညွှန်ပြနှင့်အတူခြေလှမ်းများတ ဦး တည်းအားဖြင့်ပွုပါပွီ။ ပြီးတာနဲ့အိုကေ။ ၎င်းသည်အမှားများစွာပြုလုပ်နိုင်သည် (ကျွန်ုပ်တွင်ဓာတ်ပုံရှိသော်လည်းမည်သို့ပို့ရမည်ကိုမသိပါ) နှင့် GALAXY S လိုဂိုတွင်ဆဲလ်ဖုန်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်တတ်သည်။ အချိန်အကြာကြီးမှန်ကန်စွာဖွင့်သည်။ ဘယ်လိုစက်နှိုးခြင်းနှင့်အမှားများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံ။
မင်္ဂလာပါ၊ သင့်စာမူဟောင်းသည်ဖြစ်သော်လည်းအသုံး ၀ င်ဆဲဖြစ်သော်လည်းဖိုင်များကိုကြီးမားသော (သို့) ရေရှည်ဆာဗာများမှတင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါ။ မင်္ဂလာပါ
Stephanie Goncalves ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်တယ်။ မင်းကိုနှောင့်ယှက်တာစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းသည် samsgung galaxy S GT-I9000 ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအခြားဖုန်းကုမ္ပဏီမှအခြား SIM ကဒ်တစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုလိုပါကကျွန်ုပ်စတင် root လုပ်၍ ဤသင်ခန်းစာပါအချက်များကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ http://androidadvices.com/how-to-root-galaxy-s-on-android-2-3-4-xxjvp-firmware/3/ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်တည်ဆောက်မှုအရေအတွက်က XXJVP မှာအဆုံးသတ်သွားလို့ပါ။ ODIN PDA တွင် CF-Root-XX_JVP_AAD_RFS.tar ဖိုင်ကို အသုံးပြု၍ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသော်လည်းကျွန်ုပ် FAIL သတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ထပ်မံကြိုးစားခဲ့သည်၊ FAIL ပြန်ပေါ်လာသည်၊ ယခုဖုန်းကိုအိုင်ကွန် (၃) ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အမှတ်အသားနှင့်တယ်လီဖုန်း။ download mode ဒဏ်ငွေရိုက်ထည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာကျော်လွန်ပြီးမသွားဘူး။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ? သင့်ရဲ့ tutorial ထဲမှအဆင့်များကိုစမ်းကြည့်။ ပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားပါ။ ကျွန်ုပ်အလွန်ကြောက်ရွံ့ပါသည်။ သင်ကအလုပ်လုပ်မယ်လို့ထင်ပါသလား မည်သည့် stock firmware ကိုအသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ မှားယွင်းစွာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်တွင်ဆဲလ်ဖုန်းလုံးဝဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့ပါသည်။
ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ငါတကယ်ကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်သည်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာလက်လှမ်းမမီပါ၊ ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောဖုန်းနှင့်ဆဲလ်ဖုန်းများသည်အနည်းဆုံးလုပ်ခထက်အဆ ၁၀ ဆပိုမိုများပြားပါသည်။
Estefany Goncalves အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်၏ samsung galaxy core i8260l သည် wiffi ကိုမသုံးပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်နာလန်ထူ odin နှင့် i8260lubamg3 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ??????????? ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
ငါပြီးသားကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အောင်မြင်ပါပြီ !! သင်ပုံကိုတိုက်ရိုက်တင်လျှင် cf root file ကိုဖတ်မရ။ .rar ဖိုင်ကိုဖွင့်ရမည် (ငါတို့ crack နှင့်တွဲနေသောပုံကိုကြည့်ပါ။ 😉)
အိန်ဂျယ် Crs ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ps ကျွန်ုပ် download mode ထဲမဝင်မချင်းအဆင်ပြေပါသည်။ ps yes! ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုဖွင့်သောအခါ… .odin ကမှတ်မိသည်။ သို့သော်၎င်းကို download mode တွင်ချိတ်ဆက်သောအခါ windows က ၄ င်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ၊ usb ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုသည်ချွတ်ယွင်းနေသည်။
Angel Crs အားပြန်ပြောပါ
WALKAAAAAAAAAAA ကိုမသုံးပါနှင့် ဟုသူကပြောသည်
တစ် ဦး ကကင်လုပ်ခိုင်းငါအရာအားလုံးကိုပြု။ ငါ PASS တယ်ဘယ်တော့မှ။ ယခု Samsung i9000 ၏ Firmware ကိုပိတ်ပါ။ ဒါကအသုံးမ ၀ င်ဘူး၊
NO ANDAAAAAAAAAAAA သို့ပြန်ပြောပါ
၎င်းကို linux အသုံးပြုရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ windows ထဲတွင် odin ကိုမထည့်နိုင်ပါ။ ၎င်းကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သိုလှောင်မှုစနစ်ဖြင့်ဆက်သွယ်သောအခါကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကကျွန်ုပ်ကိုမသိပါ
ODIN PDA အပိုင်း၌ RAR FILE ကိုကျွန်ုပ်မချပါ။ အဖြေတစ်ခုခုလား။
Mario velasquez ဟုသူကပြောသည်
လူကြီးလူကောင်း, I9000 ပစ္စည်းကိရိယာသည်မည်သည့်သော့ချက်ကိုမဆိုတုံ့ပြန်ခြင်း၊ download mode သို့ ၀ င်ရန်ခက်ခဲသောပြန်လည်စတင်ခြင်း mode ကိုမတုံ့ပြန်သည့်အခါမည်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများပါလိမ့်မည်။ ... အလေးအနက်ထားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည့်နည်းလမ်းအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများကိုအမြဲပုံမှန် mode ကိုအပေါ်လှည့် ... ။ သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်အတွက်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ။
Mario Velasquez အားပြန်ပြောပါ
ဟေးသူငယ်ချင်းငါဖိုင်တွေကိုနေရာချထားလိုက်ပြီ။ ငါစပေးမယ်၊ ဒါမှမတိုးဘူး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ android 9000 ရှိသည့် Samsung Galaxy i2.1t ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူ 2.3.6 သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ i9000 နဲ့ i9000t ဟာသူတို့ရဲ့ roms တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ သို့သော်အခြားမော်ဒယ်များအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ မင်္ဂလာပါ
အကြှနျုပျ၏ tean, kuidas သည်ငါ့ကိုအပြည့်အဝ olulised ja kui palju ငါ့ကို olla õnnelikud armastatud inimesega, mõnikord pole see lihtne ။ ငါ့ထံသို့လာသည်ကို၎င်း၊
E-post: (info @ spelloflife Org)
Külasta: www .spelloflife ။ org
Kui vajate oma suhetes abi ။
Lina Roza သို့ပြန်သွားပါ
Android ပေါ်ရှိ BlackBerry Messenger? အားလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်